मनोरञ्जन « Drishti News
लेट्स किल दिस लभ : जसले ‘गंगनम स्टाइल’लाई उछिन्यो (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २६ चैत । केही दिनयता एक कोरियन गीतको भिडियोले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ । जुन गीतले अहिलेसम्म यु–ट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको ‘गंगनम स्टाइल’को रेकर्डलाई
Published On :9April, 2019
‘हरेक घरको दानव’ लत बन्दै छ पब्जी
एमपी सुब्बा याद राख्नुस् कि हिजोआज जो स्र्माटफोनमा व्यस्त छ उ ‘पब्जी’ खेलिरहेको छ । अझै नजिकै गएर नियाल्नुस्, उनी चिच्चाइरका हुन्छन्, ‘ओई मार मार, त्यसलाई पछाडिबाट हान, ओई, आयो–आयो’
मेरो कम्ब्याक होइन, निरन्तरता हो– सुष्मा लामा, मोडल
‘म फेरि मोडलिङमै फर्किँदै’ करिब पौने पाँच वर्ष ग्ल्यामर्स फिल्डमा ओझेल परेकी मोडल तथा कार्यक्रम प्रस्तोता सुष्मा लामाले सुरुमै भनिन्, ‘साथीभाईहरुकै आग्रहमा एकपटक कम्ब्याक हुने ईच्छा जाग्यो ।’ सन् २०११
Published On : 8 April, 2019
तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल हुँदै
काठमाडौं, २५ चैत । तामाङ समुदायको मौलिक संस्कृति, विषयबस्तु र ज्ञान परम्परा प्रबद्र्धनको उद्देश्यसहित तामाङ अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सव हुने भएको छ । तामाङ आवाज, सेलो फाउण्डेसन र एससीआरसीले गर्न लागेको
Published On :7April, 2019
अनमोल-सुहाना सम्बन्ध ‘फिल्ममा जस्तै…’ !
काठमाडौं, २४ चैत । फिल्म ‘ए मेरो हजुर–३’मार्फत रजतपटमा अभिनेत्रीका रुपमा डेब्यु गर्न लागेकी सुहाना थापा यतिखेर चर्चामा छिन् । आफू अभिनीत फिल्म रिलिज हुनअगावै यी नवोदित अभिनेत्री नेपाली फिल्मका
अब ३० चैतमा धुर्मुसको ‘मातृभूमी कप’
काठमाडौं, २४ चैत । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ निर्माण सहयोगार्थ आयोजना गर्न लागिएको ‘मातृभूमी कप’ ३० चैतमा हुने भएको छ । यसअघि
Published On :6April, 2019
‘केःसाङला’को २१ बैशाखमा च्यारिटी गरिँदै
काठमाडौं, २१ चैत । लिम्बू भाषाको संस्कृतिकमूलक फिल्म ‘केःसाङ्ला’ आउँदो २३ बैशाखमा काठमाडौंमा विशेष च्यारिटी हुने भएको छ । शनिबार राजधानीमा एक समाहरोबीच फिल्मको एक गीत र ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै
Published On :5April, 2019
‘पुलतीको घर’ लोकार्पण
काठमाडौं, २२ चैत । ‘झुसैझुस भएको कीराले सपना देख्छ रे, एक दिन रङैरङ पुतली बनेर उड्ने । जसलाई हामी झुसिलकीरा भनेर हेला गर्छौं, परपर धपाउँछौँ, राम्रो घाम, हरियो पात र
काठमाडौं, २२ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहित्यकार महेश थापाद्वारा लिखित पुस्तक मरिचिकाको एक कार्यक्रमबीच शुक्रबार विमोचन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा कृति विमोचन गरिएको हो
क्रिकेट मैदानका लागि सहयोग गर्दै १०१ हलमा ‘लभ स्टेशन’
काठमाडौं, २२ चैत । नेपाली फिल्म ‘लभ स्टेशन’ आज शुक्रबार मुलुकका १०१ ओटा सिनेमा हलमा रिलिज हुनेछ । फिल्म प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा लभ स्टेशन निर्माण टिमका तर्फबाट भरतपुरका निर्माणधिन गौतम
नेपालमा साइलेन्ट कोरोना ? संक्रमितमा किन लक्षण देखिएको छैन ?
कोरोनाबाट विदेशमा १२८ नेपालीले ज्यान गुमाए, मध्यपूर्वमा संक्रमण बढ्ने खतरा
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश